अबको ५ देखि ७ वर्षमा तपाईं आँफूलाई कहाँ देख्नुहुन्छ ? | Jukson
एक समय पोखराका दैनिक पत्रिकाहरूमा विभिन्न विषयमा लेखिएका उनका लेखहरू पढ्न पाईन्थ्यो । उनको प्रतिध्वनी स्तम्भ विशेष गरेर तत्कालिन युवामाझ चर्चित थियो । आजकाल काठमाडौबाट छापिने पत्रपत्रिकाहरूमा आक्कलझुक्कल मात्रै उनलाई पढ्न पाईन्छ । २०५८ सालतिर पोखरामा रिडर्स क्याफे खुलेको थियो । एकाध वर्ष चल्यो र बन्द भयो । खोल्ने यिनै थिए । कुनै बेला करिअर बाबा थियो यिनको नाम । आजकाल करिअर कोच भएको छ। विगत १५ वर्षदेखी निरन्तर वैदेशिक अध्ययन परामर्श व्यवसायमा संलग्न छन् । त्यसैले होला यिनको परिचयमा करिअर कोचसँगै वैदेशिक अध्ययन विशेषज्ञ पनि थपिएको छ । करिअर कोच एवं वैदेशिक अध्ययन विशेषज्ञ राजन गोदार अलाइट ग्रुप अफ कन्सल्ट्यान्ट्सका प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट हुन् र अष्ट्रेलियाको ब्रिसबेन शहरमा रहेको क्विन्सल्यान्ड इन्टरनेसनल ईन्स्टिच्युटका क्षेत्रिय प्रतिनिधि पनि हुन् ।
उनकै जक्सनमा जक्सन डट कमले राजन गोदारसँग गरेको संवादको सारांश :
खासमा यो करिअर भनेको के हो ?
- खासमा छ नि, यो करिअर भनेको केही होईन । मजस्तै बूढो भैसकेको मान्छेका लागि एउटा भूत हो । तपाईजस्तै जवानहरूका लागि यो भविष्य हो । मैले र मजस्तै मान्छेहरूले यसलाई सम्झिन मात्रै मिल्छ । चाहेर पनि सर्जिन सक्दैनौं । बनाउने वा बिगार्ने सुविधा हामीलाई छैन । तपाईं र तपाईजस्तै मान्छेले यसलाई सर्जिन मिल्छ । तपाईहरूलाई बनाउने अनि बिगार्ने दुवैथरी सुविधा छ । मन लागेको गर्नुस् । खासमा याद राख्नुस् कि भोलि तपाईं पनि म जस्तै बूढो हुनुहोला । त्यो बेला तपाईं पनि आफ्नो करिअर सम्झिनुहोला । त्यसैले सम्झिँदा मजा आउने गरि आफ्नो करिअर सर्जनुहोला ।
अनि करिअर काउन्सिलिङ भनेकै चैं के हो ?
- हामी सबैसँग आ-आफ्नो जिन्दगी छ । आ-आफ्नो जिन्दगीको आ-आफ्नै सपना छन् । सबैको भविष्य छ । उद्देश्य छ । गन्तव्य छ । त्यहाँ सम्म पुग्ने बाटोका बारेमा विस्तृत जानकारी दिनु करिअर काउन्सिलिङ हो । त्यहाँ पुगिसकेपछि के के हुन सक्छ भन्ने कुराको दृश्य देखाउनु हो करिअर काउन्सिलिङ ।
यो पनि भन्दिनुस् कि यसको किन आवश्यक्ता छ ?
- वास्तवमा अत्यावश्यक छ । किनकी हामी धेरैसँग गन्तव्य हुन्छ तर बाटो हुँदैन । गन्तव्यतर्फ पाइला चाल्नुअघि बाटो भेट्टाउनू जरूरी छ । त्यो पनि सही बाटो । हिँड्नुपर्ने बाटोको बारेमा पुर्व जानकारी राख्न आवश्यक छ भने करिअर काउन्सिलिङ पनि आवश्यक छ । तपाईले बोकेको उद्देश्यको देश कस्तो होलारु तपाईले सोचेजस्तै वा फरकरु उद्देश्यतर्फ लम्कनुअगाडि यो जानेर बुझेर मात्रै समय, मेहनत र लगानी गर्नु तपाईले तपाईकै लागि गर्ने सत्कर्म हो । जस्तै, तपाईं एउटा कुनै नयाँ ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ । त्यस ठाउँको बारेमा जानेर-बुझेर जान चाहनुहुन्छ कि केही पनि थाहा नपाइकन जान चाहनुहुन्छ ? थाहा पाएर जान चाहनुहुन्छ भने करिअर काउन्सिलिङको आवश्यक्ता छ ।
करिअर बन्छ कि बनाईन्छ ?
- बडो कष्ट दिन्छ यो प्रश्नले मलाई । कहिलेकाँही त लाग्छ कि म आँफैमा कन्फ्युज छु । आँफैलाई सोध्छु कतै म जानअन्जान पाखण्डि अभ्यास त गरिरहेको छैन । अनुभवको आधारमा भन्छु हैरु तपाईले बनाउँदै लगेपछि करिअर बन्दै बन्दै आउँदो रहेछ । सम्झँदा मजा आओस् वा पीडा भओस् । जस्तो करिअर बनेपनि बनाउँदै लगेपछि बन्दै जाँदो रहेछ। न झट्ट बन्छ न बनाईन्छ । एक निश्चित अवधिभित्र हामिले गर्ने गराउने अनेकन क्रियाकलापले नै हाम्रो करिअर निर्माण भैरहेको हुँदो रहेछ । करिअर आँफै बन्दैन, बनाउनु पर्छ पनि सत्य हो । र यो पनि सत्य हो कि चाहेर नचाहेर, थाहा पाएर वा नपाएर हामी हाम्रो करिअर निर्माण गरिरहन्छौं ।
करिअर निर्माणमा उमेरको कुनै हद हुन्छ ?
- तपाईसँग तपाईको करिअर निर्माण गर्न उमेरको कुनै हद छ र? छ भने हुन्छ । छैन भने हुँदैन । तर हुनुपर्ने चैं हो कि होईन भनेर सोध्नुहुन्छ भने म हुनुपर्छ भन्छु । किनकी मान्छेको चोला नै यस्तो छ । मान्छेसँग आयूको सिमा छ । उसले चाहेर नचाहेर बूढो हुनै पर्छ । मर्नै पर्छ । अपवादको कुरा नगर्ने हो भने हाम्रो सरदर आयू कति ? ६५ वर्ष । यदि यो सिमा छ भन्ने मान्नुहुन्छ भने करिअर निर्माणमा पनि उमेरको हद हुनुपर्छ भन्ने मान्नुस् । हाम्रो आयु चार सय वर्षको हुन्थ्यो भने ५० वर्ष करिअर निर्माणमा लगाउन सकिन्थ्यो होला । हैन ?
मानेँ । यो पनि बताईदिनुस् कि करिअर काउन्सलरले के को आधारमा परामर्श दिन्छ ? वा एउटा करिअर काउन्सलरलाई के ले असल करिअर काउन्सलर बनाउँछ ?
- एउटा करिअर काउन्सलरसँग अनुभव हुनै पर्छ । उ अध्ययनशिल हुनैपर्छ । आँफैलाई अपडेट गर्न जुन दिनदेखी कञ्जुस्याँई गर्छ त्यो दिनदेखी उसले काउन्सिलिङ गर्न पनि बन्द गर्नुपर्छ । सृजनात्मक हुनु उनिहरूको अनिवार्य स्वभाव हो । विश्लेषण गर्ने सीप तथा सृजनशिलता विना करिअर काउन्सलर बन्छु भन्नू मुर्खता हो ।
परामर्श दिने व्यक्तिले आफ्नो सोंच मात्रै लाद्ने संभावना हुँदैन र ?
- बडो गलत हुन्छ त्यस्तो कहिँ कतै भैहाल्यो भने । असलमा सोंच लाद्ने होईन । उनिहरू हिँड्न खोजेको बाटो कस्तो छरु पुग्न खोजेको गन्तव्य कस्तो छ र कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने देखाउने मात्रै हो । हिँड्ने- नहिँड्ने उनिहरूको कुरा ।
एउटा गोलमा हिँडेको व्यक्तिलाई परामर्शदाताले अर्कै बाटो देखाईदियो भने के हुन्छ ?
- गोल त गोल भैहाल्यो । त्यही गोलमा पुग्नका लागि उसले हिँडिरहेको बाटो भन्दा फरक बाटो देखाइदिन सक्छ । तर सहि बाटो देखाउनु पर्छ । यसो भयो भने डराउनु पर्ने केही छैन । केही हुँदैन । कहिलेकाँही परामर्शको चरणहरूमा गोल नै नयाँ पनि सृजना हुन सक्छ ।
राम्रो करिअर काउन्सलर कसरी छान्ने ? खराब परामर्शले त असल परिणाम ल्याउँदैन होला ?
- जटिल काम हो, बजारमा करिअर काउन्सलरहरूको संख्या जो बढिरहेको छ । सामान्यतया जसलाई करिअर काउन्सलिङ चाहिएको हो उसले केही मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ होला । काउन्सलरको प्रोफाइल बुझ्न केही समय खर्चिनु पर्ला । उसका उपलब्धि, योग्यता, सीप, क्षमता, तालिम लगायतका विषयमा बुझेर राम्रो वा नराम्रो छुट्टाउन सकिएला । तर भन्न सक्दिन कि यति नै गरेर राम्रो वा नराम्रो किटान गर्न सकिन्छ । हो, सही परामर्श अमृत हुन सक्छ भने खराब परामर्श विष हुन पनि सक्छ । खराब परामर्श लिनुभन्दा नलिनु वेश । अमृत खान नपाउनु खयर ठिकै हुन्छ । विष खानु घातक हुन्छ ।
भनेपछि आफैमा पनि आफूले रोजेको करिअर र करिअर काउन्सलर दुवै चिजमा ज्ञान हुनु पर्यो ?
- केही विशेष जानकारी हुनै पर्यो । कम्तिमा म के गरूँ भनेर कोही नआओस् । यो-यो मध्ये के गरूँ भनेर सोध्न आओस् । कहाँ जाऊँ भनेर सोध्न नआओस् । यो यो ठाउँमा जान खोजेको कसरी जाउँ भनेर बुझ्न आओस् ।
एक क्लिकको जमाना छ । निशुल्क उपलब्ध छ हरेक सुचना तथा जानकारी । किन चाहिन्छ करिअर काउन्सलर ?
- हो त, है रु संसारको सर्वोत्तम काउन्सलर स्वयं हो । जमाना एक क्लिकमै छ । भैदिन्छ के भने पाएजति, भेट्टाएजति सुचना तथा जानकारीले मात्रै पुग्दैन । त्यसरी पाइने, भेट्टाइने थुप्रै चिज सहयोगी हुन सक्छन् । महत्वपुर्ण कुरा त उहाँले आफ्नो बारेमा गुगल सर्च गरेर भेट्टाउने केही हुँदैन । अर्को कुरा पाएभेट्टाएका ती सम्पुर्ण सुचना एवं जानकारीलाई फिल्टर पनि गर्नुपर्ला । त्यो जंक कलेक्सन अफ इन्फर्मेसनले केही सहयोग अवश्य गर्ला । तर साँच्चिकै काउन्सिलिङ गर्ला ? अब, खोज्नु, संगाल्नु, छान्नु र अध्ययन गर्नु अनि व्यवहारमा ल्याउनु कति लामो प्रक्रिया होला ? यस माध्यमबाट जानकारी लिएका कुराले कति धेरै मनोबल देला ? र यो कति उचित अभ्यास होला ?
आजकाल बजारमा करिअर काउन्सिलिङ दिने थुप्रै परामर्शदाता कम्पनिहरू छन् । यस्तो अवस्थामा कस्ता परामर्शदाता रोज्ने ?
- नझुक्किने हो कि प्लिज । तपाईले बजारमा थुप्रै देख्नुभएको वैदेशिक अध्ययन परामर्शदातृ कम्पनिहरू हो । उहाँहरूले विशेष गरेर विदेशी विद्यालय( विश्वविद्यालयहरूका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम, ति कार्यक्रममा भर्ना पाईने विधी, भर्ना हुन चाहिने विभिन्न योग्यता, उपलब्ध छात्रवृत्ति, त्यस देशको भिसा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा पेश गर्नुपर्ने प्रमाण, कागजात एवं जानकारी र त्यस देशको अध्यागमन सम्बन्धि व्यवस्थित नितिनियमहरूको बारेमा परामर्श तथा सहय‍ोग गर्नुहुन्छ । सामान्यतया भर्ना एवं प्रवेशाज्ञा परामर्शदाता भन्न सक्नुहुन्छ ।जतिपनि यस्ता कम्पनिहरू देख्नुभाको छ कृपा गरेर ती सबैलाई करिअर काउन्सिलिङ दिने परामर्शदाता भनेर नबुझ्दिनुहोला, नबुझाईदिनुहोला ।
तपाईं वैदेशिक अध्ययन विशेषज्ञ पनि भएको नाताले सोध्न मन लाग्यो कि वैदेशिक अध्ययनमा जाँदा विद्यार्थीलाई यस्ता कम्पनीको परामर्श किन जरूरी पर्छ ?
- सुसुचित भएर निर्णय गर्नु सँधै उत्तम कुरा हो । भनिन्छ नि, मेकिङ इन्फर्मड डिसिजन अलवेज ब्रिङ्गस मिराकल । यस्ता कम्पनीहरूमार्फत विदेशमा रहेका विद्यालय, विश्वविद्यालयले पठनपाठन गराउने विभिन्न कार्यक्रमहरूका बारेमा, कतिपय नयाँ खालका शैक्षिक कार्यक्रमहरू जो विद्यार्थीको आवश्यक्ता हुन सक्छ त्यसको बारेमा, र त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा भर्ना पाउनका लागि के कस्ता प्राबधानहरू छन् भन्ने बारेमा थाहा पाउन सहज हुन्छ । किनकी उनिहरू यहि अभ्यासमा अनुभवि हुन्छन् । उनिहरू अपडेटेड पनि हुन्छन् । सबैको त ग्यारेन्टी छैन । तैपनि उनिहरूको सहयोगमा यो काम छिटोछरितो र कम खर्चिलो हुन सक्छ । अर्को कुरा, भिसाका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रिया नपुर्याउँदा विद्यार्थीको मेहेनत, पैसा र समय खेर जान पनि सक्छ । जसका लागि पनि आवश्यक छ यो खालको परामर्श लिने र दिने अभ्यास । महत्वपुर्ण कुरा त्यो देशमा गैसकेपछि के गर्ने-के नगर्ने, त्यहाँको मुल्यमान्यता, रहनसहन एवं अध्यागमनका केही आधारभुत नियम आदिको अग्रिम जानकारी लिन पनि यो आवश्यक छ ।
तपाईकै भाषामा भर्ना तथा भिसासम्बन्धि परामर्श दिने शैक्षिक परामर्शदाताहरू आजकाल भारी प्रचार गरेर विद्यार्थी आफूतर्फ तान्ने ध्याउन्नमा छन् । यसले
विद्यार्थीहरूमा कस्तो असर पारिरहको छ ?
- केही सार्है राम्रो कुरा भैरहेको छ । विद्यार्थीहरूलाई के के अवसर छ त भन्ने कुरा थाहा पाउन सहज भएको छ । आफनो उद्देश्यका लागि परामर्शदाता रोज्न पाउने अवसर मिलेको छ । प्रतिष्पर्धाले विद्यार्थीमा पर्ने भार कम हुँदै गैरहेको छ । तर प्रतिष्पर्धाकै कारण केही यस्ता अभ्यास पनि भैरहेका छन् जुन हुनु हुँदैन ।
तपाईं पनि सोही पेशामा आवद्ध हुनुहुन्छ । तपाईको यो पेशा र करिअर काउन्सलरको परिचय बाझिदैन र ?
- बाझिदैन बरू एक अर्कालाई सहयोग गर्छन् । प्रथमत म करिअर काउन्सलर हुँ । त्यसपछि बल्ल मेरो पेशा । मसम्म आइपुग्ने कोही केवल करिअर काउन्सिलिङका लागि, कोही वैदेशिक अध्ययनका लागि र कोही दुवैका लागि हुनुहुन्छ । उहाँहरूको आवश्यक्ता अनुसार मैले मेरो सेवा दिने हो । उहाँहरूको आवश्यक्ता छोडेर मैले मेरो स्वार्थ पूरा हुने सुझाव दिएको दिन म मेरै नजरबाट यसरी खस्नेछु कि कहिल्यै फेरि उठ्ने छैन ।
तपाईं एक शैक्षिक संस्थाको नेपाल प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ । करिअर काउन्सिलिङ र यो पद पनि बाझिदैन रु कुनै विद्यार्थीका लागि तपाईले काम गर्ने क्याम्पस भन्दा अन्य कुनै क्याम्पस वा युनिभर्सिटीमा सुहाउँदो प्रोग्राम छ र त्यो विद्यार्थी तपाईकोमा आइपुग्यो भने तपाईं आफूले काम गर्ने शैक्षिक संस्थामा जानका लागि उसलाई मटिभेट गर्नुहुन्न ?
- म फेरी पनि दोहोर्याउँछु कि म सर्वप्रथम करिअर काउन्सलर हुँ । म आँफैलाई सन्तुष्टि नमिल्ने काम कहिल्यै गर्दिन । मसम्म त्यही मैले काम गर्ने संस्था क्युआइआइ भनेर कोही आउनुभयो भने मेरो काम विस्तृत रूपमा बताउने हो, बताउँछु । तपाईले भनेजस्तै परिवेशमा मैले मेरो नोकरी बिर्सन्छु र मेरो काउन्सिलिङको नैतिकता सम्झन्छु ।
तपाईको विचारमा सफलता के हो ?
- सफलता मेरो विचारमा मेरै लागि के हो भनेर भन्न सक्छु । अरूका लागि सफलता के हो भन्ने कुरा मैले भन्न सक्दिन । मेरा लागि सफलता भन्नू सन्तुलन हो । सम्पति, सम्बन्ध, सन्तुष्टि र स्वास्थ्यको सन्तुलन मेरा लागि सफलता हो । तपाईको लागि सफलता के हो तपाईंलाई नै थाहा होला । जिन्दगीको यही सन्तुलनभित्र छ मेरो खुशी पनि दुख पनि । यो सन्तुलन यति धेरै कमजोर हुन्छ कि जुनसुकै बेला पनि यो खलबलिन सक्छ । सन्तुलन राखिरहन सके खुशी, नत्र दुखी ।
अन्तिममा अहिलेको युवापुस्तालाई केही सन्देश ?
- ३० माथिको पुस्तालाई मेरो केही भन्नू छैन । ३० तलको पुस्तालाई यती मात्र भन्न चाहन्छु । अबको ५ देखि ७ वर्षको अवधिमा आफूलाई कहाँ, कुन स्थानमा देख्न चाहनुहुन्छर ? कृपया सोंच्नुहोला ।
बाढीले जीप बगाउँदा तीन जनाको मृत्यु